Arrin ay dad badani ”nasiib darro” ku tilmaameen oo ka bilaabatay dalka Ghana + Sawirro | Hadalsame Media
Home Arrimaha Caalamka Arrin ay dad badani ”nasiib darro” ku tilmaameen oo ka bilaabatay dalka...
Arrin ay dad badani ”nasiib darro” ku tilmaameen oo ka bilaabatay dalka Ghana + Sawirro
(Accra) 10 Agoosto 2020 – SIDA AFRIKA LOO GABAY: Dalka Ghana ayaa laga bilaabay qorshe cusub oo uu qofku biyaha caadiga ah ka iibsanayo tubooyin jidka lagu rakibay oo ay ku xiran yihiin ATM.
Sidii bansiin ama nafto ayaad kaarkaaga gelinaysaa deetana waxaad helaysaa inta dhibcood ee aad lacagtooda dhiibatey.
Waxaa la arkayey dadwayne kala duwan oo shalay ag taagnaa mashiinkan cusub si ay biyo uga dhaansadaan jidka.
Sawirka hoose waa haween Ghanian ah oo biyo caadi ah iibsanaya, waxaa sida aad u jeedid lagu xirey mashiinka ATM mana shaqaynayaan ilaa aad lacag bixiso.
Dadkii lacag baa laga gurayaa canshuur loogu yeero kaddib lacag kale ayaa looga qaadayaa isla waxyaabihii canshuurtoodii la cunay ay qaban lahayd, weliba waxaa xusid mudan in arrintan horumar ahaan loogu sawiray dadka reer Ghana, tiiyoo la iska indha tirayo in biyuhu yihiin xuquuqaha insaanka ee asaasiga ah oo dowladaha laga doonayo inay dadka ku siiyaan si bilaash ah.
Dalal kale oo Afrikaan ah ayaa qorshahan damacsan, iyadoo la fahamsan yahay in musuqu uu yahay jirro baas oo ku habsatey qaaradda Afrika, taasoo keentay in hantida shacabka aan lagu bixin barwaaqo sooranka bulshada sida adeegyada biyaha, korontada, waxbarashada, caafimaadka, jidadka, shaqooyinka iwm, taasoo xumaysay tayada nololeed ee qaaradda.
Previous articleShirka Dhuusamareeb 3 ma qabsoomi doonaa? (Saan saan arrintaa wax nooga sheegaysa oo muuqata & MW Galmudug oo digniin diray)
Next article3 arrimood oo uu wajihi doono RW cusub ee lasoo magacaabo & natiijada ka dhalan karta